आज दशैँको दोस्रो दिन : देवी ब्रह्मचारिणीको पूजा आराधना गरी मनाइँदै - Rastrakokhabar
आज दशैँको दोस्रो दिन : देवी ब्रह्मचारिणीको पूजा आराधना गरी मनाइँदै
धर्म / संस्कृति, समाज
काठमाडौँ । आज बडा दशैँको दोस्रो दिन नवदुर्गा मध्येकी दोस्रो देवी ब्रह्मचारिणीको पूजा आराधना गरी मनाइदैछ । आइतवार दशैँ घर अथवा पूजा कोठामा दुर्गा स्थापना गरिएको स्थलमा ब्रह्मचारिणीको स्तुति गरी मनाइने शास्त्रीय विधि रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । नव दुर्गामध्ये पहिलो दिन शैलपुत्रीको पूजा आराधना गरिन्छ भने दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणीको स्तुति गर्ने चलन छ ।
पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौँ दिन स्कन्दमाताको स्तुति गरीन्छ । त्यस्तै छैटौँ दिन कात्यायनी, सातौँ दिन कालरात्रि, आठौँ दिन महागौरी र नवौँ दिन सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गरिन्छ । आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म यो पर्व मनाउने चलन छ ।
Previous Post	अस्पतालले शैया लुकाउँदा गम्भीर संक्रमित पनि आइसोलेसनमै बस्न बाध्य
Next Post	‘दाहालले बेग्लै पार्टी चलाएको ओलीको आरोप’
आयुर्वेदिक सेवामा आकर्षण बढदै
गाउँपालिकामा १० करोडको भवन निर्माण हुदै
गुल्मीमा जुवा खेल्ने वडाअध्यक्षसहित १२ जना पक्राउ
दशैँकाे टीकाकाे तेस्राे दिन आज पनि मान्यजनबाट टीका ग्रहण गरिँदै
आजको राशिफल (वि. सं. २०७७, कार्तिक १२ बुधबार)
१२ कार्तिक २०७७, बुधबार ११:१९
१२ कार्तिक २०७७, बुधबार ०८:४२
१२ कार्तिक २०७७, बुधबार ०८:३५